Jarmalka oo 7-1 ku garaacay Brazil - BBC News Somali
Jarmalka oo 7-1 ku garaacay Brazil
Image caption Miroslav Klose oo dhaliyay goolkiisii 16-aad ee koobka adduunka, sidaana waxa uu ku dhigay rikoor cusub, kaddib markii uu hal gool ka kor maray Ronaldo
Riyadii kooxda Brazil ee Koobka Adduunka ayaa waxaa si layaab leh u burburisay kooxda Jarmalka, oo gaarsiiyay guuldarradii ugu cusleyd ee ciyaartii nus dhammaadka koobka adduunka ee ka dhacday garoonka Belo Horizonate.
Brazil ayaa ciyaarta dardar ku bilowday balse waxaa xigay oo jahawareer ku riday ciyaaryahannada Jarmalka oo aad mooday in ay isku soo ballansadeen goolka Brazil.
Ciyaarta markii ay maraysay daqiiqadii 29-aadna kooxda Jarmalka waxa ay ciyaarta ku hoggaaminaysay 5-0.
Ciyaarta oo ku dhammaatay 7-1 ayaa ciyaaryahannada Jarmalka waxa ay qeybsadeen goolasha, oo goolasha waxaa saxiixay 5 ciyaartooy.
Thomas Muller ayaa isna ka mid noqday ciyaaryahannada koobka adduunka ka dhaliyay 10 gool, kaddib markii uu gool u dhaliyay kooxdiisa ciyaartii Brazil.
Image caption Brazil oo dhabarka loo saariyay mid ka mid ah guuldarrooyinkii ugu xumaa ciyaaraha koobka adduunka, Muller ciyaaryahanka goolka ku bilaabay Brazil
Miroslav Klose, ayaa rikoor cusub u dhigay koobka adduunka, kaddib markii uu dhaliyay goolkii 16-aad ee ciyaaraha adduunka, isagoo hal gool ka sara maray ciyaaryahan Ronaldo.
Image caption Goolhaye Manuel Neuer oo la dabaaldegaya ciyaaryahan Toni Kroos ciyaarta markii ay dhammaatay kaddib
Toni Kroos ayaa 179 ilbiriqsi waxa uu ku dhaliyay 2 gool, halka markii dambana ay ciyaarta noqotay qofkii fursad helaaba ha dhaliyo.
Isla qeybta horana waxaa goolkii 5-aad Brazil ku xaaqay Sami Khedira, sidaa ayaana lagu kala nastay.
Markii la isugu soo laabtay qeybta labaad ee ciyaartana ciyaaryahanka weerarka kaga dheela kooxda Chelsea, Andre Schurrle, oo badal ku soo galay ciyaarta ayaa laba gool oo isxigay ku khatimay goolasha Jarmalka.
Image caption Ciyaaryahan Silva oo markii ay ciyaarta dhammaatay kaddib aamusinaya David Luiz
Balse daqiiqadii ugu dambeysay ee ciyaarta ayaa isla ciyaaryahanka ay ka wada tirsan yihiin kooxda Chelsea ee Oscar waxa uu Brazil u dhaliyay goolka calanka.
Sidaana waxaa 7-1 ku badisay kooxda Jarmalka, oo u gudubtay finaalka koobka adduunka.
Guuldarada gaartay Brazil ayaa ah tii ugu xumeyd ee abid soo marta, waana guuldaraddii ugu horreysay muddo 12 sano ah oo ku soo gaarta gurigooda.
Jarmalka ayaa noqday kooxdii ugu horreysay ee 7 gool dhalisa ciyaar semi-final ah oo ka tirsan koobka adduunka.
Sidoo kale Jarmalka waxa ay noqotay kooxda ugu gool dhalinta badan ciyaaraha koobka adduunka kaddib markii ay dhaliyeen 223 gool, waxayna jagada kala wareegeen Brazil oo horay rikoorkaas u haysatay.
Image caption Brazil oo dhabarka loo saariyay mid ka mid ah guuldarrooyinkii ugu xumaa ciyaaraha koobka adduunka
Image caption Taageerayaal reer Brazil ah oo ka qaracmay guuldarrada loo saariyay dhabarka
Image caption Tababare Scolari oo aad uga naxay guuldarrada ay kooxdiisa kala kulantay kooxda Jarmalka
Image caption Haweeneey ka mid aheyd taageerayaasha xulka Brazil oo oohin is celin waysay
Image caption Taageerayaasha xulka Jarmalka oo farxad iyo damaashaad ku dabaaldegaya gudaha magaalada Berlin